Abwaan Shube “Maleysan Waagii Aan Indhahayga Ku soo arkay ” MALO-KA-BAX | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Abwaan Shube “Maleysan Waagii Aan Indhahayga Ku soo arkay ” MALO-KA-BAX
Muqdisho (SONNA)-Barqa-kulul dhexdeed, ayaan gaari ka raacay golaha muritida iyo wacyigelinta—The National Theartre—si aan u gaaro cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Benaadir, halkaas oo aan booqasho gaaban ugu baxnay.
Markii aan gaarnay illinka laga galo cisbitaalka, waxaa na hakiyay ciidamada Ilaalada ee cisbitaalka; dabadeedna waxa ay naga guteen wajibaadkoodii shaqo ee loo idmaday.
Durbadiiba, waxa aan u dhaadhacnay gudaha, waxaana bannaanka dhismaha, qeybta maamulka nagu sugaysay agaasime— Dr.Fartuun Shariif oo aan hore ugu sii wargelinay qorshaheheenna, soo dhoweyn dabadeedna xafiiskeeda ayaannu ku nasannay.
U jeedka aan u socday wuxuu daarranaa laba arrimood: tan koowaad waxa ay aheyd, in aan booqdo bukaannada, qiimeynna ku sameeyo adeegyada Caafimaad ee uu bixiyo— iyo in uu igu leeyahay xusuus gaar ah; maaddaamma, sannadka 1980kii ay iigu dhalatay curaddeydu— xilligaas oo aan ku xasuusto in ka soo booday gidaar yar oo ku yiillay qeybta dhalmada, si aan u arko curaddeyda iyo hooyadeed; maaddaamma aan ragga loo oggoleyn. Sidaas aawadeed ayaan derbiga iska soo tuuray.
Dr.Fartuun Shariif, ayaa i geysay isla gidaarkii yaraa ee aan habeenkaas ka soo booday, runtiina waxaan galay xusuus dheer iyo xaalad kale oo dareenkeyga rogrogtay; dabadeedna jirkeyga.
Intaas kadib, waxaan sii wadannay booqashadeenii, waxaase xaalku is rogay, markii aan la kulannay duruufo adag oo uu ku shaqeynayo guud ahaan cisbitaalka iyo ka warqab la’aanta qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, haddii ay yihiin: madax, siyaasiyiin, ganacsato, culimmo iyo aqoonyahanno kaleba.
Waxaan booqanay qeybta daryeelka ubadka oo ay yaallaan qalab casri ah; isla markaasna ay ka socdaan adeegyadii caafimaad ee loogu talagalay. Sida: in catruurta ku daahda kafka hooyada, looga saaro naqaska ku dhaggan—iyo Xabka uu jiiday intuu ku jiray meeshaas. Sidoo kale, waxaa markaas daryeel Caafimaad loo fidiniyay ilmo hor-dhalad ah, oo ka soo hormaray muddadii caadiga ahayd ee sidka hooyadu ku idlanaa. Si walboo ay ahaataba, dhaqaatiirta ayaa noo sheegay in lagu koronayo qalab loogu talagalay, oo aad u hormarsan.
Intaas kadib, waxaan u sii gudubnay qeybta daryaalka carruurta la Il-daran Jadeecada iyo nafaqadarrada—Qeybtan, waxaa jiifay carruur da’doodu ka yartahay 10 sano, oo badidood laga keenay gobollada dalka—kuwa dhexeba ha u badnaadaane.
Nasiib wanaag, ma jirto sariir kiro ah iyo adeeg lacageed oo laga qaadayo hooyooyinka ku ummula cisbitaalka iyo dadyoowga kale ee u soo adeeg doonta dhammidoodba, sida ay dadku noo sheegeen.
Farriinteyda ugu dambeysa waxa weeye— baahida taalla meesha—waa isbitaalka Benaadir e—ma ahan mid wada daboolmaysa. Si kale haddii loo dhigo: maammulka cisbitaalka iyo Wasaaradda Caafimaadku ma wada buuxi karaan howshaas culus ee miisaanka leh; balse intii Karaankooda ah waa ay dadaaleen. Sidaas aawadeed, qof walba oo naga mid ah—xil sidaas oo kale ayaa saaran, si loo badbaadiyo hooyo Soomaaliyeed iyo dhallaankeeda—kaas oo ay maan-gal tahay in uu qofkii dalkeenna ka waraabin lahaa, harooyinka nabadda iyo kuwa horumarka.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminaayo oo u ambabaxay Dalka Itoobiya
Next articleOlole nadaafadeed oo todobaadkii 15-aad ka socda xeebta Liido